-एनएमबी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर किन्दा फाइदा कि बेफाइदा ? हेर्नुहोस, एक विश्लेषण :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
एनएमबी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर किन्दा फाइदा कि बेफाइदा ? हेर्नुहोस, एक विश्लेषण
३ हप्तायता एनएमबी माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । केही हप्ताअगाडि यस कम्पनीको शेयरमूल्यले १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्मको बिन्दु परीक्षण गरे पनि त्यसपछि भने लगातार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको थियो । सोमवार पनि यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । सोमवार कम्पनीको सेयर मूल्य १६ रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ८० प्रतिशत बढेर २ हजार १५ रुपैयाँमा बन्द भएको छ भने ३ सय ४६ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
६ दिने र २१ दिने मुभिङ एभरेजअनुसार यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ ।
एडीएक्स सूचकअनुसार यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ ।
विभिन्न प्राविधिक सूचकहरूले यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बुझाएको हुनाले आगामी दिनहरूमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दो प्रवृत्तिमा रहने सम्भावना उच्च रहेको सङ्केत गर्छ ।